Wasaaradda Amniga oo tababar usoo xirtay howlwadeenno ka tirsan wasaaradda | Radio Baidoa
Guriga Wararka Maanta Wasaaradda Amniga oo tababar usoo xirtay howlwadeenno ka tirsan wasaaradda
Wasaaradda Amniga oo tababar usoo xirtay howlwadeenno ka tirsan wasaaradda
Wasiiru dowlaha wasaaradda Amniga gudaha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Mudane Farxaan Cali Axmed ayaa tababar sare loogu qaadayay aqoontooda usoo xiray howlwadeenno ka tirsan wasaaradda Amniga gudaha.
Tababarka oo socday muddo 30 cisho ah ayaa waxaa bixinayay Macalimiin aqoonsare leh oo ka socday hay’addaha Gabbal-daye iyo Vision, iyada oo ay iska kaashadeen wasaaradda Amniga gudaha,dowladda Ingiriiska iyo UNDP.
Munaasabadda lagu soo xirayay tababbarka ayaa waxaa ku sugnaa agaasimaha guud ee wasaaradda Amniga agaasime waaxeedyada iyo Charlie oo ah lataliye ka tirsan Wasaaradda.
Agaasimaha Sharciyada iyo siyaasadda Cabdullaahi Faarax Siyaasi oo goobta ka hadlay ayaa la dardaarmay dadkii ka faa’idestay tababarka “waxaa wax la idiin baraya oo tababarka la idiin siinayaa waa in waad biri maskaxdiina ugu faa’ideesaan dalkiina iyo dadkiina”.
Agaasimaha guud ee wasaaradda Amniga Yuusuf Cali Maxamed ayaa boggaadiyay hay’adaha Gabbal-daye iyo Vision oo iyagu tababarka bixinayay.
Ugu danbeen Wasiiru dowlaha Wasaaradda Amniga Mudane Farxaan Cali Axmed oo soo xiray tababarka ayaa sheegay in la joogteyn doono tababbarada, isagoo dadka ka faa’ideystay tababbarka kula dardaarmay iney dalka geliyaan wixi la soo baray.